GROURMASTER RAINBOW Tile Joint Grout (Available in different colos) Groutmaster ဆိုသည်မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရာသီဥတုနှင့် လျော်ညီအောင် အထူးပြုလုပ် ဖော်စပ်ထားသော Polymer တစ်မျိူးဖြစ်သည်။ရေနှင့် ရောစပ် အသုံးပြုသော အခါ နူးညံချောမွေ့ ပြီး အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေသည်။နောက်ဆုံးတွင် အခြောက်ခံထားခြင်း ဖြင့် ချောမွတ် ပြေပြစ်သော မျက်နှာပြင်ကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ FLOORING PRPDUCTS ; (ကြမ်းခင်း ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများ) PU coating စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ရေကို အခြေခံ ထုတ်လုပ်ထားသော ဘိလပ်မြေ တစ်မျိူး ဖြစ်သည်။
Long Lasting: The ancient Romans developedahighly sophisticated type of concrete that has withstood the test of time for nearly two thousand years. They use the volcanic ash pozzolan for its chemical reactivity. The silica bases in today`s AAC Block closely emulate their techniques. Weather and Earthquake Resistant: The AAC house isasurvivor many times in earthquake. They have also good property to resist any weather condition. Energy Saving: AAC Blocks provide superior thermal insulation by offering an array of benefits such as thermal mass, thermal inertia, whole wall coverage and low air infiltration. These combine and translate into energy savings which do not degrade and continue to appreciate over time.It has better thermal and sound insulation due to less joint. This result in saving energy cost of air-conditioning. Faster Construction: AAC`s advantage in construction is its quick and easy installation since the material can be routed,sanded and cut to size on site using standard carbon tip band saws,hand saws and drills. Cost Saving: AAC Block is lighter than clay brick. Hence, it reduce dead load of structure.So,we can save steel up to 20~25%,concrete up to 10% and energy saving 15%. ဖိအားမြင့်ခံ ကွန်ကရစ်အုတ် (APC Brick) များသည် နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကပါ။ အနီးကပ်ဆုံး အနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ တို့တွင်လည်း တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများ အရည်အသွေးမှီ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမှီသော APC အုတ်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန် တင့်သင့်သောဈေးနှုန်း၊ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့မူကြောင့် လျှင်မြန်သောတည်ဆောက်မှုကိုရရှိပါသည်။ ထို့ အပြင် ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုသက်တမ်းတလျှောက် စွန့် ပစ်ပစ္စည်းမရှိသဖြင့် လူနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ သက်တမ်းကြာရှည်ခံပါသည်။ အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်သည် လေအေးစက်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချသုံးစွဲနိုင်သည် မီးလောင်မှုကို ၇၀၀`C ကို ၄ နာရီကြာခံနိုင်ပါသည်။ အဆိပ်အတောက်မရှိပါ။ အငွေ့ အသက်မရှိပါ။ ဆူညံမူကိုလျော့ချပေးသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့် အထာကျ ခိုင်ခံ့ ခေတ်မှီသော အဆောက်ဦးကိုရရှိရန် APC Brick ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ အကောင်းဆုံး အဆောက်အဦး ရရှိရန် လူကြီးမင်းတို့ နှင့် ထပ်တူကြိုးစား ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
MARBLEX FOR NATURAL STONE &amp; MARBLE
MARBLEX သဘာဝ ကျောက်များနှင့် စကျင်ကျောက်များ ကပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကော်အမျိူးအစား MARBLEX ဆိုသည်မှာ ကော်ကို အခြေခံ၍ အထူးပြုလုပ်ထားသော polymer ဘိလပ်မြေ တစ်မျိူးဖြစ်သည်။ သဘာဝကျောက်များ နှမ်းဖက်ကျောက်များ နှင့် စကျင်ကျောက်များ ကို ကြမ်းခင်းနှင့် နံရံများ တပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် နေရာတွင် အသုံးပြုသဖြင့် အဖြူရောင်ကို အဓိကထား ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသည်။အစိုဓာတ် ရှိသော ဘိလပ်မြေများကို သဲနှင့် ရောစပ်ပြီး ရရှိလာသော ကော်ဖြစ်သည့် အတွက် အစွန်းအထင်းနှင့် ညစ်ညမ်း မှူများ မဖြစ်စေသည့်အတွက် သုံးစွဲရာတွင် အထူးသင့်လျော်သော ကော်တစ်မျိူးဖြစ်သည်။
Union Enterprise ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော ကြမ်းခင်းကြွေပြားသည် သုံးစွဲရလွယ်ကူပြီး ခိုင်ခံသပ်ရပ်လှပပါ သည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏နေအိမ်၊အဆောက်အအုံ၊တိုက်ခန်း၊ဟိုတယ်၊ ၊စားသောက်ဆိုင်တို့ တွင် ကြွေပြားကိုအသုံးပြုပြီးအလှဆင်နိုင်ပါသည်။ကြမ်းခင်းကြွေပြား များမှာ လည်းဒီဇိုင်းစုံလင်လှပြီး အရောင်စုံကာလာစုံ၊ဒီဇိုင်းစုံရရှိနိုင်ပါသည်။ဒါကြောင့်လူ ကြီးမင်းတို့ ၏နေအိမ်၊အဆောက်အအုံ၊တိုက်ခန်း၊ဟိုတယ်၊စားသောက်ဆိုင်များတွင် Flooringကြမ်းခင်းကိုအသုံးပြုချင်ပါက Union Enterprise ကုမ္ပဏီကိုဆက် သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
PVC Wall/Ceiling Panel, နံရံကပ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ
PVC Wall panel and PVC Ceiling panel, different size, partten, colour for choose [email protected]
Different style and size for choose. for more information:[email protected]
PVC wall panel,PVC ceiling panel. Different Colour, different partten. [email protected]
ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်လှပသော Exterior Wall Tile များကို ဂျပန်နိုင်ငံ၏ JIS စက်မှုနည်းပညာစံချိန်စံညွန်း နှင့် အညီထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကို ၁၀၀%ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။မျက်နှာပြင် ၂ခုလုံးရေစုပ်အားမရှိသလောက် နည်း၍ အစိုဓာတ်မရှိသောကြောင့် အစိုပြန်ပြီး ကွာကျမှုများ မဖြစ်ပေါ်အောင်တားဆီးပေးသည်။ခေတ်မှီစက်ကိရိယာများနှင့် တာရှည်ခံအောင် စိစစ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး အရောင်ကိုလည်း သဘာဝအရောင်တိုင်း ထုတ်လုပ်ထားသည်။တစ်ခါအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဆေးထပ်သုတ်စရာမလိုပဲ တသက်တာ အရောင်မှေးမှိန်ခြင်းမရှိခြင်းသာမက အစွန်းအထင်းများ လွယ်လွယ်ကူကူ မကပ်နိုင်ခြင်း၊အပူစုပ်ယူမှု နည်းသောကြောင့် ပြင်ပမှ အပူဒဏ်ကို အထဲသို့ မဝင်နိုင်အောင် တားဆီးပေးသည်။ထို့အပြင် အတွင်း၊အပြင် အပူချိန်ကို ထိန်းညိပေးသည်။သဘာဝ ပစ္စည်းများကိုသာ ကုန်ကြမ်းအနေဖြင့် အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ရုံသာမက ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတိုင်း အသုံးပြုသင့်သော Natural Clay Exterior Wall Tiles များဖြစ်သည်။
A variety of 2ftx2ft wood-patterned and granite and marbe look-alike floor tiles are also available at Shwe Myitta Home Mart. သစ်သားကွက်အမျိုးမျိုးနှင့် ဂရင်းနိုက်၊ မာဘယ် အကြောပုံစံ ၂ပေ ပတ်လည် ကြမ်းခင်းကြွေပြားအမျိုးမျိုးကို Shwe Myitta Home Mart မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205
We have floral-patterned ceramic wall tiles that&#039;ll add some unique looks to your home. သင့်အိမ်ကိုတမူထူးခြားစေနိုင်တဲ့ပန်းပွင့်ကွက်ကြွေပြားset များလည်းရှိပါတယ်...Showroom မှာအသေးစိတ်လာရောက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Shwe Myitta Home Mart 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-791962615
ဒီဇိုင်းဆန်းသော ဖောင်းကြွကြွေပြားများ 3D Tile
အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ရေမပေါက်သော နံရံကပ်ကြွေပြားများနှင့် ရာသီဥတုဒါဏ် အထူးခံနိုင်၍ OutDoor အသုံးပြု နိုင်သောကြမ်းခင်းကြွေပြား တွေဖြစ်ပါတယ်။ Customer များရဲ့အိမ်ကို မိမိအိမ်ကဲ့သို့ သဘောထားပြီး မိမိရပ်ကွက် မိမိမြို့နယ်အတွင်း အလှဆုံး အိမ်များဖြစ်အောင် လူကြီးမင်းတို့ Idea နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Latest Design ကြွေပြားကြွေထည်များဖြင့် အလှဆင်ပေးပါသည်။ (ပုံ၌ပြထားသော Designများအပြင် အခြားDesign အမျိုး 200 ကျော် Show Room လာရောက်လေ့လာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ) STOCK လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်ခြင်း။ အကွဲ အနာအစာကို စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးဝယ်ယူနိုင်ခြင်း။ Quality Product များဖြစ်သဖြင့် ရေပေါက် ရေကွက်မှု လုံးဝမရှိခြင်း။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများရရှိနိုင်ခြင်း။ ဈေးနူန်းအထူးသက်သာခြင်း။ စသည့်အားသာချက်များအပြင် တဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချလိုသော Customer များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ နှင့် Project များ အတွက် အထူးဈေးနှုန်းများ Discount များထပ်မံရရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းမျိုးကိုမှ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်း များဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမှာမို့ မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ် Customer များအားလုံး လာရောက်အားပေးဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင်လှပတဲ့ ၁ပေ ပတ်လည် 3D ရုပ်လုံးကြွကြွေပြားဒီဇိုင်းများကို Shwe Myitta Home Mart မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ Polished တင်ထားသော ကြမ်းခင်း ကြွေပြားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Acid ဒဏ် ခံနိုင်တဲ့ ကြွေပြားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ 3D ရုပ်ကြွပုံစံ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကြွေပြားဖြစ်တာမို့လို့ တစ်မူထူးပြီး အမြင်ဆန်းသစ်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။
SCG အမှတ်တံဆိပ် ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် သိပ်သည်းမှုကို အဓိကထား ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ် ထားသောဘိလပ်မြေ တစ်မျိူး ဖြစ်သည်။ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အဆောက်အဦး များ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် တောင့်တင်းခိုင်မာ မှုအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အသုံးပြုရန် သင့်တော်သော ဘိလပ်မြေ တစ်မျိူးဖြစ်သည်။အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သော အင်ဂျင်နီယာ များ၏ အကြံပေးချက် များဖြင့် သင့်လျော်သောအချိူးအစားများ ရောစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ရေရောစပ်မှု အချိူးအစား မှန်ကန်စွာ ရောစပ်ခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည်။မတူညီသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အဆောက်အအုံးများကြာရှည်တည်တံခိုင်မြဲရန်အတွက် ကွန်ကရစ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ထိုဘိလပ်မြေကို အသုံးပြုပြီးနောက် Compressive Strength ကို လျော့ချပေးနိုင်သည်။